Ntughari - Green Renewables | Green Renewables (Peeji nke 2)
Gịnị bụ imegharị ihe
N'isiokwu a, anyị na -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe nrụgharịgharị bụ, kedu uru ya na ụdị njiri mara ya.
Echiche maka ịchọ mma ite iko
N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe bụ echiche kacha mma iji chọọ iko iko mma ma mee ka ụlọ gị bụrụ ebe mara mma.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara njirimara na ojiji nke thermoplastics. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ị ga-eme n'akwụkwọ ochie ị na-ejighi. Muta ihe banyere ntuziaka ebe a.
Gịnị mere iji dị mkpa
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe niile ị kwesiri ịma maka ihe kpatara iji megharịa ji dị mkpa na ihe kpatara ya.
Ihe mkpofu redioaktivu
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma maka mkpofu redioaktivu na njirimara ya. Muta ihe banyere ya ebe a.
Pesdị ihe mkpofu ahịhịa
Mara nke ọma ihe dị iche iche nke ihe mkpofu ahịhịa dị. Anyị na-akụziri gị ihe niile gbasara ya ebe a.
Plastik ihe arụ
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara plastik na-emebi emebi na uru ha. Mụtakwuo maka ngwaahịa ndị a.
Ebe etinyere ihe nkpuchi
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ebe a tụbara ihe mkpuchi ahụ na ihe bụ ebe ha na-aga. Muta ihe banyere ya ebe a.
Igwe ikuku ụlọ
Ke ibuotikọ emi anyị na-agwa gị ihe niile mkpa ka ị mara iji mee ka gị onwe gị n'ụlọ ntụ conditioner nzọụkwụ.
Anyị na-agwa gị ihe dị mkpa maka ịmegharị mkpọ na ịdebe ha na akpa odo. Mụọ ya ebe a.
Ihe eji emegharia
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe eji emegharị emegharị na etu esi eji ha. Mụtakwuo banyere usoro ha Ebe a.
Otu esi eme akwukwo
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara etu esi eme akwụkwọ na ihe eji eme ya.
Kedu ihe dị ọcha
Anyị na-agwa gị mkpa nke ebe dị ọcha maka njikwa nke mkpofu obodo mepere emepe. Muta ihe banyere ya ebe a.
Esi imegharị n'ụlọ
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu esi emegharị n'ụlọ. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-egosi gị echiche kacha mma na ndụmọdụ gbasara ịchọ mma ekeresimesi. Mụta inye echiche gị na imegharị.
Esemokwu dị n’etiti iko na kristal
Anyị na-agwa gị ọdịiche niile dị n'etiti iko na kristal, njirimara ha na iji ihe ọ bụla mee ihe. Muta ihe banyere ya ebe a.
Otu esi eme ncha
N’isiokwu a anyị gosiri gị otu esi eme ncha eji arụ ụlọ n’ụlọ iji megharịa mmanụ eji. Muta ihe banyere ya ebe a.
Anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ecoparks na uru ha. Mụtakwuo maka usoro njikwa mkpofu a.
N’isiokwu a anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara PET plastik na njirimara ha. Muta ihe banyere ya ebe a.
Ke ibuotikọ emi anyị na-agwa gị ihe niile mkpa ka ị mara banyere vermiculture, e ji mara na bayoloji nke ikpuru.
N'isiokwu a ị nwere ike ịchọta ọkwa niile nke ụdị plastik dị iche iche. Mụta banyere uru ọ bara na ngwakọ ya ebe a.
Ihe nhicha nke Ocean
N'isiokwu a, anyị kọwara ihe ọrụ nhicha Ocean bụ nke ikpocha plastik site n'oké osimiri. Muta ihe banyere ya ebe a.
Imegharị ihe mkpuchi plastik
Imegharị okpu rọba bụ otu n’ime mkpebi kachasị mma ị ga - eme ma maka ịdị n’otu na maka gburugburu. Banye ebe a ma chọpụta ihe kpatara ya.
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara compost bin
N’isiokwu a anyị kọwara ihe niile ikwesiri ịma maka compost bin. Mara atụmatụ na uru niile o nwere.
N’isiokwu a anyị kọwara ihe efu efu bụ, ihe ọchọrọ ime na otu esi eme ya. Banye ebe a ka ị mara ya nke ọma.
Iweghachi ihe mkpofu
N’isiokwu a anyị na-egosi gị ihe mgbake mkpofu bụ yana etu esi arụ ya. Mụta banyere njikwa ahihia ebe a.
Mụta imegharị ihe eji edozi ụlọ
N'isiokwu a, anyị na-egosi gị ụfọdụ ezigbo echiche mbụ iji mụta otu esi egweri arịa ụlọ ochie n'ụlọ. Echefula ya!
N'isiokwu a anyị na-egosi gị nsogbu nke oriri akwụkwọ na ụwa na anyị na-akụziri gị nzọụkwụ site nzọụkwụ otu esi egweri akwụkwọ n'ụlọ.
N’isiokwu a, anyị gosiri gị ụdị kaadiboodu bụ ihe e ji mara ya na njirimara ya. Nwere ike ịmụta maka ịchọ mma na-adigide.
Mụọ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mkpa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị. Banye ebe a ka ịmụtakwu banyere akara ngosi a.
N'isiokwu a, anyị na-akụziri gị usoro kachasị dị na mbụ iji weghachite uwe n'ụlọ wee nye ha ọhụụ ọhụrụ. Echefula ya!
Ihe mkpofu siri ike
Ihe mkpofu siri ike bụ ndị a na-eme kwa ụbọchị gburugburu ụwa. Na nke a, anyị na-akọwa ọkwa ha na etu esi achịkwa ha.
N'isiokwu a anyị kọwara nke ọma otu esi egweri plastik n'ụzọ ziri ezi. Tinye ebe a iji zaa ajụjụ gị.
Amaghi ihe mkpofu etinye n'ime akpa awọ? N’isiokwu a anyị kọwara gị nke ọma. Bata mụta maka ya.
Upcycling bụ a imegharị ihe maka iji usoro ebe anyị na-enye a ukwuu na ịba uru ka n'efu ka ọ na mbụ nwere. N'ebe a, anyị na-akọwa ihe niile n'ụzọ zuru ezu
N'isiokwu a ị ga-enwe ike idozi obi abụọ niile banyere akpa aja aja. Will ga-amụta ihe ị ga-atụba ya na ihe ejiri ya.
Na post a anyị gosipụtara gị n'ụzọ zuru ezu akụkụ ndị bụ isi nke 3r. N'ụzọ dị otú a, anyị na-akọwa otu esi belata, jigharị ma megharịa.
Anyị na-akọwa ụdị ihe mkpofu iji tinye na akpa odo. Banye mara ihe ndị kachasị emehie na ụfọdụ ịmata ihe.
Ihe enwere ike imeghachi
Anyị na-akọwa n'ụzọ zuru ezu ihe enwere ike ịmegharị ihe na ihe dị mkpa ịmegharị. Banye ma mụtakwuo banyere ya.
Ntughari nke karama iko
Ighagharị karama iko bụ usoro nke ụbọchị. N'isiokwu a ị ga-enwe ike ịmata ihe usoro ịmegharị ya bụ na obi abụọ na-ebilite.
Na nke a, ị nwere ike ịmụta ọtụtụ echiche banyere otu esi ejigharị karama rọba ma nye ha ohere nke abụọ. Want chọrọ ịmatakwu?
Kedu ihe bụ ngwaahịa na-ere ere ere
Ngwaahịa nwere ike ibibi onwe ya na okike. Mụọ ebe a ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ya.
Na post a, ị ga - enwe ike ịmata ụdị akara akara imegharị dị na ihe onye nke ọ bụla pụtara. You chọrọ ịma ha?
Ntughari nke akwukwo na kaadiboodu abawanyewo na 2017
Edemede a gosipụtara data gbasara mmụba nke imegharị akwụkwọ na kaadiboodu na Spain na 2017 na ihe a tụrụ anya ya. Want chọrọ ịmatakwu?
A ga-emegharị kọfị kọfị na igbe ụfọdụ
Kọfị kọfị bụ ụdị ihe mkpofu nke a ga-anakọta na ụdị akpa dị iche. Want chọrọ ịma ka esi esighachi ha?
Pụtara nke agba nke imegharị ihe maka iji na otú anyị ga-esi jiri ha mepụta nkewa nke mkpofu.
Ighagharị na-adịwanye mfe
Anyị nwere ike ịme mmegharị dị mfe ma dị mfe imegharị na, n’amaghị ama, anyị ga-enyere ụwa anyị aka. You chọrọ ịma ihe mmegharị ahụ bụ?
Gini mere iji jiri meghari mmanu eji?
Naanị otu lita mmanụ a gwara gị rụọ nwere ike imerụ ihe dị ka otu puku lita mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Ya mere, ọ dị mkpa imegharị mmanụ eji.
Obodo kwụ ọtọ nke na-emegharị ọtụtụ na Spain
Obodo ndị kwụụrụ onwe ha nke rụgharịrị ihe kachasị na 2014 bụ Andalusia, ndị Catalonia na Community nke Madrid na-esote.
Recycle a la Madrileña, mkpọsa mgbapụta ọhụrụ na Madrid
Ndị Madrid City Council na Ecovidrio amalitela mgbasa ozi ọhụrụ iji weghachite iko ma mee ka ndị mmadụ mara mkpa ọ dị.
Ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi jụrụ nrụpụta ọkụ ọgbụgba ọhụrụ abụọ na Madrid
Na Madrid, a chọrọ ka e wuo ụlọ ọkụ ọhụrụ abụọ iji gwọọ ihe mkpofu. Ọtụtụ ndị otu gburugburu ebe obibi ajụla.
Obere eriri magnet na-eduzi ya, obere tubes graphene nwere ike ịchekwa ọla dị arọ na mmiri emetọ. N'etiti…
Banyere iji akpa rọba egbu oge ruo June 1
E bu ụzọ hazie ya Jenụwarị 1. E yigharịrị ya na Machị 28. Ọ ga - emecha si ...
PaperLab, igwe maka imeghari ohuru nke office
Epson na-achọ ịzụ ahịa igwe iji megharịa akwụkwọ akụkọ ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ. Akwụkwọ a nwere ikike ịmepụta ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche na ọbụlagodi akwụkwọ na-esi isi.
E weghachiri ihe mkpofu plastic dị na Mediterranean ka ọ bụrụ uwe
Gbọ mmiri azụ̀ 200 dị na Spen amalitela ịchịkọta mkpofu rọba na Oke Osimiri Mediterenian. Otu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na Madrid ga-amalite imegharị ihe mkpofu a iji me akwa maka akwa uwe.
Mmetọ ikuku gbanwere na ink na ngwa nbipute
Onye na-eme nchọpụta ka mepụtara usoro dị nkọ na nzacha usoro, ekele nke o jisiri ike wepụ carbon soot site na mmetọ ikuku ma gbanwee ya na ink na-ebi akwụkwọ.
Nrụpụta ụwa nke plastik
Mmepụta plastik na-abawanye kwa afọ (288 nde tọn, ya bụ, ihe karịrị 2,9% na 2012), na mmekọrita kpọmkwem na uto nke ọnụọgụ ndị mmadụ, yabụ na mmụba nke mkpofu.
A na-eji osisi na kaadiboodu eme osisi, nke ka ukwuu na akwụkwọ na kaadiboodu na-eri, na mbibi nke oke ọhịa. Uru akwụkwọ na kaadiboodu bụ na enwere ike weghachite ya ma degharịa ya iji mepụta akwụkwọ ndị ọzọ na kaadiboodu.
A na-ekwukarị ike grey iji gosipụta mmetụta gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa.
Solvatten bụ usoro ọgwụgwọ mmiri na-enyere mmadụ aka iji mee ka mmiri dị ọcha ma mee ka ọ drinkụọ.
Diswepu ihe mkpofu na okike nwere ọtụtụ nsonaazụ na anyị amaghị otu esi atụ ma ọlị ... ha na-adịkarị ogologo oge karịa ka anyị chere ruo mgbe ebibiri ha.
Mee ka mmiri ghara imetọ ya
Ọ bụ eziokwu na a na-ebokarị ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ndị ọrụ ugbo ebubo mmetọ mmiri, ndị ọrụ nke onwe ha nwekwara oke ọrụ ha.
Ihe omumu nke ebe obibi na-adabere na oghere aluminom
Ejiji ejiji eco-enyi na enyi nke dabere na soda nwere ike imeghe
Obere akpa na ngwa eji si taya arụ ọrụ
E nwere ugbu a ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụdị na-egweri taya iji mee akpa na ngwaahịa ndị ọzọ
Na njedebe nke afọ, a ga-agwụchara ụlọ ọrụ imegharị ihe na Mérida
Mgbe anyị wụsa mmanụ esi nri ma ọ bụ mmanụ ụgbọ ala na nsị, anyị na-emebi oke osimiri na oke osimiri ka ọ na-emepụta ihe nkiri na-enweghị mmiri nke na-egbochi ọwụwa anyanwụ na mgbanwe nke oxygen site na ndụ mmiri.
Ebumnuche iji megharịa diapers nwa ma mepụta biogas
Ngwongwo plastik na-eme ka o kwe omume ịmepụta mmanụ ọkụ
Hotelslọ ọrụ NH ka enyere aka imegharị ihe
NH na-etinye aka na imegharị ya
Kedu ihe anyị nwere ike iburu ebe dị ọcha
Ihe ndị dị ọcha bụ ebe a na-ekesa na obodo niile nke Spain ebe ị nwere ike iwepụ ihe mkpofu nke na-ekwesịghị ịhapụ n'ime ihe ndị ahụ n'ihi na ọ dị oke egwu maka gburugburu ebe obibi.
Mmiri mmiri ozuzo nwere ike ịba uru maka ojiji dị iche iche n'ụlọ, ịnwere ike ịnakọta ya ma mee ka ọ belata iji belata mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n'ụlọ, na-enyere gburugburu ebe obibi aka.
Eco-enyi na enyi na-ebi akwụkwọ
Mbipụta akwụkwọ na-aga n'ihu na-emetụta gburugburu ebe obibi. Na mgbakwunye na mkpọsa ego, ụlọ ọrụ na-anwa ịmepụta teknụzụ nke na-enye ha ohere iji obere akwụkwọ na ink.
Ihe ịchọ mma nke Canada na-ewepụta otu agbamakwụkwọ nwere diamonds eco-friendly
Companylọ ọrụ Canada nke na-egbuke egbuke Earth na-emepụta ụgbụ agbamakwụkwọ na mgbanaka aka na diamonds eco-friendly, gold and platinum.
Mmiri mmiri na-eme plastik
Algaeventure Systems (AVS), bu otu n’ime otutu